Arzantina : Miara-Mitaintaina Amin’ny Ekipam-Pireneny Ny Mpankafy Baolina Kitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2014 15:32 GMT
Tsy dia nisy nampiavaka azy loatra ny tantara nandritra ny lalao fifanintsanana tamin'ny 1 Jolay teo amin'i Arzantina sy Soisa izay niafara tamin'ny fandresen'i Arzantina 1-0 ka nampiakatra ny ekipa ho amin'ny dingana manaraka. I Angel Di Maria no namono ny baolina efa tany amin'ny faran'ny fanalavàm-potoana.
Nandefa fitiavana sy fanohanana nahasafononoka ho an'i Arzantina ireo mpankafy taorian'ny lalao. Nanjary lohahevitra niasa be tao amin'ny Twitter ny Chau Suiza (veloma ry Soisa) sy #TeAmoArgentina ( tiako ianao ry Arzantina). Kanefa raha toa ka resy teo ny firenena dia mety ho fahadisoam-panantenana sy alahelo no nanamarika ny resaka. Fa mety hivadika vetivety foana indray mipi-maso ho fankahalana ny fitiavan'ireo mpankafy Arzantina. Angamba noho ny fiadiana ny Amboara Erantany toy ny fampiononana ary ny faharesena dia midika fa tsy maintsy miatrika ny raharahany andavan'andro ry zareo.
Notsarovan'ireo Arzantina teo anivon'ny fifaliana tamin'ny tenifototra hoe Tenemos a Dios ( Manana Andriamanitra izahay) ny Papa François :
Nizara ny hasambarany ihany koa ireo mpilalao Arzantina, toy ny nataon'i Ezequiel “Pocho” Lavezzi tao amin'ny pejy Facebook-ny :
Nanoratra [es] tao amin'ny pejy Facebook-ny ofisialy ihany koa i Lionel Messi :